China mobile phone accessories bag mveliso kunye nabenzi | Hong Bang
Yima ibhegi yokutshixa yeyona ndlela ithandwayo kakhulu yokupakisha kwintengiso kuba le ndlela yokupakisha iyahluka kwaye iyasebenza kwaye inomtsalane. Njengoko igama ngokwalo libonisa, ezi ngxowa ziyakwazi ukuma kuyo yonke indawo enzima. Inesakhono esishelufini sokubonisa kwaye banokunciphisa iimfuno zokugcina kunye nokwandisa indawo yeshelufu. Ngokwesiqhelo, isikhwama sokuma sisebenzisa ikakhulu ukutya okulula, into yokutya, ubucwebe, iti okanye ikofu, ukutya kweNja, ukutya kwezilwanyana zasekhaya, kunye nezinto zokupakisha zefowuni.
Iipropathi ze Ibhegi Ziplock
Ukutya okufuywayo okuyiPhakamisa isingxobo senziwe kwizinto ezininzi zokuthintela izinto ezinokuhlelwa ngokwamaqela ama-3 aphambili, ahlanganisanayo ukubonelela ngengxowa enezinto ezizinzileyo nezinganyangekiyo. La maqela ma-3 a:
Ukhuseleko kunye nomgangatho ophezulu iya kuba ngumgaqo wethu wokuqala. Yonke imveliso yethu yenziwe ngezinto zokutya ezikwibakala lokutya oko kuthetha ukuba ifilimu esiyisebenzisayo, i-inki kunye nomgca wemveliso zi-100% zokhuseleko kuye wonke umntu omdala nokuba ngumntwana. Ngapha koko, singqongqo ngomgangatho oko kuthetha ukunganyamezeli nakweyiphi na indlela yokulalanisa ebonisa kulwakhiwo olomeleleyo, ukuqina komoya kunye nokushicilela okucacileyo. Ukupakisha umdlalo oethe-ethe kunye nogqibeleleyo kunye neemfuno zabathengi ziya kuhlala ziyinjongo yethu.
Uphawu Yima Up Ziplock Bag
Akukho Mdlalo wokuLungelelanisa uLula ukuPhakama
Egqithileyo Ibhegi ukutya Pet
Okulandelayo: Iingxowa zespout